Ukuphupha iJamani ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IJamani iyiriphabliki kwaye yenziwe ngamazwe ali-16 omanyano. Yasekwa ngamagunya aphumeleleyo emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi ngo-1949. IJamani yahlulwa yangamazwe aseMpuma nawaseNtshona de yadibana kwakhona ngo-1990. Emva kokuwa kodonga lwaseBerlin, iBerlin yaba likomkhulu lomanyano kwaye urhulumente waseburhulumenteni wafuduka kwikomkhulu langaphambili, iBonn. , eBerlin. IBundestag ngoku igcinwe kwisakhiwo sangaphambili Reichstag yeso sixeko sakha sahlulwa. Kukwakho nemilambo emikhulu eJamani efana neRhine, iElbe kunye neDanube.
Iphupha malunga neJamani linokukwenza uzive usekhaya. Mhlawumbi iphupha belikwelinye ilizwe ixesha elide kwaye likukhumbuza ngabahlobo kunye nosapho kwiimeko eziqhelekileyo zaseJamani, umzekelo, kumnyhadala wokudubula. Ukutolikwa kwamaphupha, ngakumbi iingcinga zakho kunye neemvakalelo zamaphupha malunga nolu phawu lwamaphupha zithatha isigqibo.
1 Uphawu lwephupha «iJamani» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iJamani» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iJamani» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iJamani» - ukutolikwa ngokubanzi
Iphupha mhlawumbi linxulunyaniswa nesimboli yephupha 'iJamani'. Ukuziva ekhaya. Ngokwenkcazo yephupha, limela ulangazelelo olungazalisekiyo olunokunxulumana nento ethile okanye yimvakalelo nje engummangaliso ekunzima ukuyichaza. Iphupha litsalela ingqalelo ephupheni lokuba unganamathela kwixa elidlulileyo endaweni yokujonga kwikamva.
Mhlawumbi amaphupha nawo ayasuka eJamani. Ke uphawu lwephupha lubandakanya Umnqweno wokuhamba kwaye kwangaxeshanye ulumkisa ngokudana okunokwenzeka. Ukushiya ilizwe lokuzalwa ephupheni kunokubhengeza ekutolikeni kwephupha ukuba iphupha eli liya kuba nexhala kakhulu malunga nosapho lwakho. Ukuba ukwelinye ilizwe kwaye uphupha iJamani, kungekudala uza kufumana iindaba ezimnandi ezivela kwilizwe lakho.
IJamani nayo imele udonga lwaseBerlin kunye nokudityaniswa kwakhona kweMpuma neNtshona Jamani. Isimboli yephupha emva koko inokuba ngu umqobo Ukuzalwa emzimbeni kubomi bamaphupha, anokoyiswa. Ekuchazeni amaphupha, nangona kunjalo, kunokuba ngaphambili Ubukhoboka kwaye ilumkisa ukwahlulwa.
Nokuba iMpuma neNtshona Jamani badlala indima ephupheni kuxhomekeke ekubeni ukwahlukana okanye umanyano kugxininisiwe ngakumbi. bucala ngasekunene imele ekutolikeni kwamaphupha kokubini isiphelo kunye nokubuyela kwindawo yokuqala. EMpuma Ibandakanya ukuqala kwaye ibhekisa kulwazi lwakudala. Isimboli yephupha "iJamani" inokuchaza kule meko ukuba iphupha kufuneka, umzekelo, licinge ngeziqalo zeprojekthi ebalulekileyo ukuze iziswe ngempumelelo.
Uphawu lwephupha «iJamani» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwephupha, uphawu lwephupha "iJamani" livakalisa imvakalelo yokhuseleko kunye ne Ubulungu ngaphandle. Umphuphi unobuntu obuzinzileyo kwaye uziva egxiliwe kwindalo yakhe.
Nangona kunjalo, kuxhomekeke kwiimvakalelo ezinxulumene nelizwe lemvelaphi ephupheni, umfanekiso wephupha ungabonisa ukungoneliseki okanye ukungaqheleki. I-subconscious ibonisa ubunzima bokuziqhelanisa neemeko zokuphila ezikhoyo. Ukuphupha ngokungakhathali kulangazelela amaxesha amnandi.
Udonga, oluhlala lunxulunyaniswa neJamani, lumele umntu ekutolikeni amaphupha. umgca wokwahlula ukuphupha ngokungazi kubeka phakathi kwakhe nabanye. Ukongeza, uphawu lwephupha "iJamani" luphawu lokuchasana kubuntu ekufuneka buxolelaniswe nabanye.
Uphawu lwephupha «iJamani» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidluleleyo, uphawu lwephupha "iJamani" lubhekisa kwindibaniselwano yesiqalo, emelwe empuma yelizwe, isiphelo esimile entshona.
Ngokubanzi, iJamani ibhekisa kutoliko lwamaphupha. Umjikelo yobomi nayo inyaniso yokomoya.